Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qaraxa Ka Dhacay Dalka Yemen. – Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qaraxa Ka Dhacay Dalka Yemen.
calamada May 23, 2016 2 min read
Ugu yaraan 20 Â Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Meliteriga ee Dalka Yemen ayaa dhintay, kadib markii Miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday goob ay Ciidamadu ku uruursanaayeen oo ku taalla Mandiqadda Khowr Maskar ee magaalada Cadan ee Koonfurta Dalka Yemen.
Ilo wareedyo Maxalli ah ayaa sheegay in Qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow Saldhigga Guutada 39-aad ee Ciidamada Meliteriga, waxaana qaraxa uu dhacay xilli ay goobta ku sugnaayeen Saraakiil ka tirsan Wasaaradda difaaca ee Xukuumadda daba dhilifka ah ee dalkaasi.
Ilo wareedyadaas waxay sidoo kale sheegeen in tobonaan Askar ah oo dhaawacyo qaba in la gaarsiiyay Isbitaallo kuyaalla magaalada Cadan, waxaana suuragal ah inuu sii kordho Khasaaraha, maadaama Ciidamada dhaawacmay Â qaarkood ay xaaladoodu aad u liidato.
Daqiiqdo kadib qaraxaasi waxa uu qarax kale ka dhacay Mucaskarka lagu magacaabo Badar ee kuyaalla isla magaalada Cadan, iyadoona la maqlayay dhawaqa qarax aad u weyn, kaas oo illaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Goob joogayaal ku sugan magaalada Cadan ayaa waxay sheegeen inay arkayeen qiiq iyo Uuro isku shareertay gudaha Xerada Meliteriga ee weerarkaasi uu ka dhacay, mana cadda illaa iyo hadda waxa qaraxaasi sababay iyo inuu ka dhashay bam lagu dhex aasay gudaha Saldhigga iyo inay tahay Camaliyad Istish-haadi ah oo Xaruntaasi lagu weeraray.
Qaraxyadani is daba joogga ah ee ka dhacay magaalada Cadan ee xarunta kumeel-gaarka ah ee Maamulka daba dhilifka ee Dalka Yemen waxay kusoo beegmayaan xilli uu faraha kasii baxaya ammaanka magaaladaasi iyo magaalooyinka kale ee kuyaalla Koonfurta dalkaasi, iyadoona qaraxyo kuwani la mid ah ay todobaadkii hore ka dhaceen magaalada Al-Mukalla ee Gobolka Xadru Mowt.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 16-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 17-08-1437 Hijri.